ပြီလ | အောက်တိုဘာလ 2021
Libra အတွက်ဘယ်နေ့တွေကောင်းလဲ? လတိုင်း၏ ၆ ရက်သည် Libra အတွက်အထူးသဖြင့်ကံကောင်းသည်။ ၎င်းတို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလအတွက်၊ ၁၊ ၅၊ ၉၊ ၁၉၊ ၂၀ နှင့် ၂၇ ။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၂၊ ၆၊ ၁၅၊ ၂၀၊ ၂၄ နှင့် ၂၉ ရက်။
Aprilပြီလသည် Scorpio အတွက်လကောင်းပါသလား။
Aprilပြီလသည် Scorpio အတွက်လကောင်းပါသလား။ Scorpio ကိုtoပြီလမှကြိုဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့သည့်လကသင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရလိုသောကြောင့်သင်၏ချိုမြိန်သောဘက်ကိုထိမိခဲ့သည်။ Scorpios လိုပြင်းထန်သောဆိုင်းဘုတ်များသည်ညှပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနားယူခြင်း၊ သင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေသည့်အစားအစာများစားခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ချစ်ရသူအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်Aprilပြီ ၁၁ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Aries တွင်လဆန်းကိုသုံးပါ။ 2021 ။
ရေကဲဲဲအတွက်ဘယ်နေ့ကကောင်းပါသလဲ။ အောက်ဖော်ပြပါနေ့ရက်များသည် အကယ်၍ သင်က Aquarius ဖြစ်လျှင်အထူးသဖြင့်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလအတွက် - ၁၊ ၅၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၀ နှင့် ၂၀။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၆ နှင့် ၂၉ ရက်။ မတ်လအတွက် - ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၇ နှင့် ၃၀ ရက်။
Taurus အတွက်ဘယ်ရက်ကောင်းပါသလဲ မွေးဖွားသည့်နေ့နှင့် Universal ရက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အပြင်လတိုင်း၏ခြောက်ရက်သည် Taurus အတွက်ကံကောင်းသည့်နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလအတွက်၊ ၅၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇ နှင့် ၂၅ ရက်။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၂၄ နှင့် ၂၈ ရက်။
Aries အတွက်ဘယ်ကံကောင်းလဲ? လတစ်လ၏ကိုးခုမြောက်နေ့နှင့်ကိုးဆ၊ ၁၈၊ ၂၇ နှင့်မြှောက်သောရက်စွဲများသည် Aries အတွက်အများဆုံးကံကောင်းသည့်နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ နဝမလ၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ကိုးရက်မြောက်နေ့သည်အလွန်ကံကောင်းသည်ဟုယူမှတ်ခံရလိမ့်မည်။
Virgo အတွက်ကံကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကဘာလဲ။ လတိုင်း၏ခြောက်ရက်သည် Virgos အတွက်အထူးကံကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလအတွက်၊ ၁၊ ၃၊ ၉၊ ၁၅၊ ၂၀ နှင့် ၃၁ ။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၃၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၂၃ နှင့် ၂၇ ရက်။
ကင်ဆာရောဂါအတွက်ကောင်းသောနေ့များကဘာတွေလဲ။ လတိုင်း၏ခြောက်ရက်သည်ကင်ဆာအတွက်အထူးကံကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလ - ၃၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၆ နှင့် ၂၉ ။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၇၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၂ နှင့် ၂၇ ။
Capricorn အတွက်ကံကောင်းသည့်နေ့များကားအဘယ်နည်း။ လတိုင်း၏ခြောက်ရက်သည် Capricorn များအတွက်အထူးသဖြင့်ကံကောင်းသည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလအတွက်၊ ဒုတိယ၊ ၇၊ ၈၊ ၁၈၊ ၂၆ နှင့် ၃၁ ရက်။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် - ၃၊ ၇၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃ နှင့် ၂၇ တို့အတွက်။
Gemini အတွက်ကံကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကဘာလဲ။ ကံကောင်းခြင်းအရောင်များ - အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်။ ကံကောင်းခြင်းနေ့ - ကြာသပတေးနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ Lucky ကျောက်မျက်ရတနာ - မြ (သို့) အဝါရောင်နီလာ၊ လက်ချောင်းများအလယ်၌လက်စွပ်တစ်ကွင်းအနေဖြင့်ဝတ်ဆင်ရမည့်မြကျောက်၊ အဝါရောင်နီလာ၊ Libra, Aquarius ။ သဟဇာတမဖြစ်သောရာသီဥတုလက္ခဏာများ - Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces ။